छालाको सुरक्षाको लागि जाडोमा नरिवलको तेललाई यी ७ तरिकामा प्रयोग गर्नुहोस् « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
अहिलेको मौसम भनेको चिसो हुने बेला हो । काठमाडौं देखि देशभरीनै चिसो बढेको छ । अहिले मानिसलाई धेरै जाडो भएको छ ।
काठमाडौमा जाडोसँगै वायु प्रदुषण पनि बढेको छ साथै काठमाडौंबाहिरका मुख्य सहरमा पनि वायु प्रदुषण बढीरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्छ । जाडोसँगै वायु प्रदुषण हुदाँ मानिसको स्वास्थ्यमा धेरै नकरात्मक असर पर्ने गर्छ विशेष गरेर यसको जोखिममा जेष्ठ नागरिक र बालबच्चामा नै देखिने देखिएको छ त्यसैले अनावश्यक रुपामा घरबाट बाहिर नजानु नै राम्रो मानिन्छ ।
यदि हिड्नु नै छ भन्यो भने पनि माक्सको प्रयोग गर्नु हुन विशेष अनुरोध गछौ्रँ । यस्तो मौसम हुदा हाम्रो छालामा पनि धेरै प्रकारका समस्या आउने गर्छ र हामीले पनि छालाको विशेष सुरक्षा गर्नु पर्छ । यो मौसममा खानादेखि छाला र कपालसम्मको विशेष हेरविचार गर्नुपर्छ ।
आज हामी तपाइलाई आफ्नो छाला तथा कपालसम्म विशेष हेरचाह गर्नको लागि नरिवलको फाइदाबारे जानकारी दिन गइरहेका छौ ।
नरिवलको तेलको फाइदाबारे थाहा पाउनु भयो भने जाडोयाममा तपाईंले यसको प्रयोग पक्कै गर्नु हुनेछ । यो आफ्नो हाई फ्याटी एसिड र एन्टिब्याक्टेरियल गुणका कारण छाला र कपाललाई प्राकृतिक रुपमा नरम बनाउन सहयोग गर्छ ।
यति मात्रै होइन, घुम्रिएको कपाललाई सिधा बनाउन, मेकअप रिमुभ गर्नेजस्ता धेरै ब्युटी ह्याक्समा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
आजकाल बजारमा नरिवलको तेलका पनि विभिन्न विकल्प पाइने गरिएको छ । तर नरिवलको तेल खरिद गर्ने बेला तपाईंले सिसाको लेभललाई पक्कै पढ्नुपर्छ र यसमा भर्जिन कोकोनट ओयलको मात्रा कति छ, यसमा कुनै प्रकारको सुगन्ध वा कति केमिकल मिसाइएको छ, ती जानकारी हेर्नुपर्छ ।
भर्जिन कोकोनट ओयल तपाईंको छालाका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ किनभने यो प्राकृतिक रुपमा निकै शुद्ध हुन्छ ।
के छ नरिवल तेलको विशेषता?
नरिवलको तेल काँचो नरिवलबाट बनाइएको हुन्छ । योा चिसो मौसममा धेरैजसो जम्ने गर्छ, यदि मौसम गर्मी छ भने यो पग्लन्छ पनि ।
यसमा ४८-४९ प्रतिशत लरिक एसिड, १७.९ प्रतिशत मिरिस्टिक एसिड, ७.९ प्रतिशत क्यापिटिक एसिड, ८.०-८.१ प्रतिशत पामिटिक एसिड, ५.९-६.० प्रतिशत ओलिक एसिड ९१.९-२.०० प्रतिशत लिनोलिक एसिड र ९१.९-२.१० प्रतिशत स्टियरिक एसिड हुन्छ ।
जुन छालादेखि कपालसम्मका लागि निकै राम्रो मानिन्छ । यद्यपि, नरिवल तेलको अधिकांस हिस्सा बोसोको पनि हुन्छ ।
-चमत्कारी असर कपालका लागिः
-मेकअप रिमुभरको रुपमाः
-अनुहारका लागि मेकअप प्राइमरको रुपमाः
नरिवलको तेल अनुहारमा प्रयोगका लागि पनि फाइदाजनक हुनछ । यसमा अनुहारलाई हाइड्रेट गर्ने सबै गुण हुन्छ । त्यसैले त यो तेललाई अनुहारमा लगाउँदा छाला दिनभरी चम्किलो र नरम रहन्छ । नरिवलको तेल तपाईंको मेकअपका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर थाहा छ रु तपाईं मेकअप गर्नुअघि प्राइमर झैं नरिवलको तेलको प्रयोग गर्नुहोस् । यसले तपाईंको मेकअपलाई इभन देखाउनेछ साथै छालामा ग्लो पनि आउनेछ ।
-दाँतको चमकका लागिः
-ओठ नरम बनाउनका लागिः
-नुहाउने र शेभिङका लागि फाइदाजनकः
-नरिवलको तेल चाया हटाउनका लागिः
जान्नुहोस् ! फुलेको सेतो कपाल कालो कसरी बनाउने ?
अलिेको समयमा हाम्रो खानपिन केमिकलयुक्त छ सो कारण हाम्रो शरिरमा कुनै न कुनै साइडइफेट गरेको